Notokanana tetsy Tanjombato – Antananarivo Atsimondrano, androany, ny orinasa "PHARMALAGASY", ivontoerana ahafahana mampiroborobo sy manome vahana ny fikarohana ara-tsiansa malagasy. Ny CVO + gélules, fanefitry ny valanaretina Covid-19 no fanafody voalohany novokariny. Afaka mamokatra “gélules” CVO + 22 500 isa-minitra, izany hoe : “gélules” 1 350 000 isan’ora ny orinasa PHARMALAGASY. Hamokatra fanafody hafa karazany 13 ihany koa ity orinasa ity. Nitarika ny lanonam-pitokanana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Polisy nanao fisafoana amin’ny alina no sendra vehivavy iray bevohoka hamonjy hopitaly hiteraka ny Alarobia teo tokony tamin'ny 12 ora alina. Nakarin’ny Polisy tao anaty fiaran’izy ireo ary nentina haingana hamonjy ny hopitalibe CHRR Ambositra. Nigadona teo amin’ny faritry ny hopitaly ny fiara saingy tsy tonga tao amin’ny efitrano fampiterahana akory fa teraka tao anaty fiaran'ny Polisy ilay vehivavy. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 28 septembre 2020 19:23
Ankilimarovahatse - Amboasary Atsimo: Ankizy miisa valo maty noho ny hanoanana
Mamono olona ny kere na tsy fahampian-tsakafo any Amboasary Atsimo. Tao amin’ny Fokontany Ankilimarovahatse izao dia fantatra fa ankizy miisa valo no namoy ny ainy noho ny hanoanana. (Jereo Sary Tohiny)
Nitondra fampitaovana sy lelavola ho fanampiana ireo mpianatry ny oniversite may trano tao amin’ny Bloc Amicale II teny Ankatso ny FITEFA (Fikambanan’ny Teraky ny Faritany Antsiranana) tarihin’i Bekasy Jonhfrince. Miisa 25 ireo mpianatra zanaky ny Faritany Antsiranana, traboina noho io haintrano io.
Nahazo fotodrafitrasa vaovao ny Kaominina Anosibe Ifody (Moramanga, faritra Alaotra Mangoro) sy ny Kaominina Niarovana Caroline (Vatomandry, faritra Atsinanana) hamatsiana rano fisotro madio ny mponina ao aminy. Mponina maherin'ny 10 000 no hisitraka rano fisotro madio amin’ireo Kaominina ireo. Izao no tanteraka dia noho ny fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana eo amin’ny governemanta amerikana, amin'ny alàlan'ny tetikasa RANO WASH an'ny Sampandraharaha amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID) tantanan'ny CARE Madagascar, sy ny Minisiteran'ny rano, ny fidiovana ary ny mponina eo an-toerana, sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny sehatra tsy miankina, izay hitantana ny fotodrafitrasa, ary hiantoka azy ho lovain-jafy sy hanome rano tsara kalitao hatrany.
Notokanana nandritra ny fandalovan’ny Governoran’ny Rotary International Randriamifidy Hugues Emmanuel ny laboratoara tao amin’ny CEG Razaka. Fanambin’ny Rotary Club du Lac Alaotra sy ny Rotary Club Anosy Antananarivo ny nanavaozana an’ity laboratoara ity. Vita soamantsara ny asa izay nandaniana 9 tapitrisa Ariary. (Jereo Sary Tohiny)
Nangataka ny hananganana distrika Katolika vaovao ny aty Mangambe Sahananto, kaominina ambanivohitra Toamasina faha 2, satria lehibe loatra i Foulpointe izay misy azy ireo ankehitriny. Tsy misy lalana anefa mampitohy an'i Mangambe sy Ambodiriana izay mirefy 30km eo, ny vokatra tsy mivoaka, ny fifandraisana tsy misy.Nizara izany fitarainana sy fangatahana izany tamin'i Kardinaly Désiré Tsarahazana, izay sady Arsevekan'ny Toamasina ireo mpino Katolika aty Mangambe, ka dia nanaiky izy ny anaovana an'i Mangambe ho distrika Katolika vaovao ao anatin'ny Diosezin'i Toamasina.
vendredi, 25 septembre 2020 10:50
Bakalorea 2020: Mitokam-ponenana ireo mpanomana ny laza adina
Manatanteraka ny « quarantaine » na mitokam-ponenana nanomboka tamin'ny 21 septambra 2020 ireo mpanomana ny laza adina amin'ny fanadinana Bakalorea 2020. Efa voamarina fa tsy misy mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 avokoa ireo olona rehetra hiatrika ny « quarantaine ».Mikato-trano, tsy mahazo mifanerasera na amin'iza na amin’iza izy ireo ao anatin'ny 40 andro mandrapahavitan'ny fanadinana. Nohamafisina ny fepetra rehetra na ara-pahasalamana, na ny fandriam-pahalemana ho an'ireo mpikarakara laza adina sy ny toerana hanatanterahana izany. Hotanterahina ny 19 ka hatramin’ny 23 oktobra 2020 ny fanadinana bakalorea sokajy ankapobeny sy ny andiany voalohany ho an’ny sokajy teknika. Hitohy ny 26 ka hatramin’ny 29 oktobra 2020 ny dingana faharoa ho an’ny sokajy teknika.
19/20 no salanisa ambony indrindra tamin’ny fanadinana CEPE 2020 tao amin’ny DREN Bongolava. Rakotondrainy Fifaliana, 11 taona, Mpianatra ao amin'ny Collège Sainte Marie Tsiroanomandidy, ZAP Tsiroanomandidy, Cisco Tsiroanomandidy no nahazo io salan'isa ambony indrindra io tamin'ity taom-pianarana 2019-2020 ity.
Tanterahina manerana ny Nosy nanomboka ny 21 septambra 2020 ny fanadinam-panjakana BEPC. Miisa 2 431 ny mpiadina voasoratra anarana hiatrika izany ato amin’ny DREN Betsiboka. Ivon-toeram-panadinana 8 no nandraisana azy ireo, ary efitrano 94 ; manaja ny fepetra ara-pahasalamana. 13 taona ny zandriolona indrindra amin'ireo mpiadina ireo, ary 23 taona no zokiny indrindra. Ny taranja Malagasy no nanombohana izany fanadinam-panjakana izany. (Jereo Sary Tohiny)